Lọ akwụkwọ ọta akara wuru turf ewu atụmatụ-News-Topflor China ejedebeghị
Kindergarten wuru turf ewu atụmatụ
Echiche:26 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-03-11 Mmalite: Saịtị
Lọ akwụkwọ ọta akara nke ụlọ akwụkwọ ọta akara nwere ọdịdị yiri ya na arụmọrụ ya na ahịhịa nkịtị. Ọ nwere ịdị nro dị elu, mgbanwe dị mma, mgbake dị mma mgbe nrụgide dị arọ, nchedo gburugburu ebe obibi, mgbochi na-eyi mgbochi, mgbochi ịka nká, arụmọrụ mmiri dị mma, eriri na-acha odo odo, na nlekọta dị mfe. Etc. Ihe owuwu bụ isi bụ:
Otu. Atụmatụ ihe owuwu nke turfị maka ụlọ akwụkwọ ọta akara
1. Lelee dum turf ubi na-ahụ ma ọ bụrụ na ntọala ya njupụta na flatness izute chọrọ, na mgbe ahụ na-amalite paving keakamere turf.
2. Tụọ ma tọọ akara ahụ na mpaghara ahụ dum, chọpụta ọnọdụ nke akara ala ma mee akara, kaa ya na agba agba nke ink, ma chọpụta ụzọ na ọnọdụ nke tebụl artificial.
3. Malite ibikwasị ahịhịa artificial: kpuchie eriri na-emegharị n'elu ala nke ahịhịa, ma jiri nchara ígwè dozie ya. A gaghị ebuli isi nke mbọ nchara elu, ebe nkwonkwo ga-agwakwa ya karịa 10 cm.
4. Tinye gluu na nkwonkwo nkwonkwo. Tupu gluu akpọnwụ, dina ma sonyere ndị ahịhịa ahịhịa ahụ ka akụkụ ọ bụla nke turf na-ejikọta ya.
5. Mgbe emechara latọ ahụ, jiri nlezianya chọpụta ma njikọta nke mpaghara nkwonkwo ọ bụla dị mma na ma adhesion nke ahịhịa artificial. Mgbe ịlelechara na ihe niile mezuru ihe achọrọ, enwere ike ịme usoro ọzọ.
6. Wụsa quartz ájá na roba ahụ dịka mkpa nke saịtị ahụ.
7. Mgbe etinyere quartz ájá ma ọ bụ akwa roba ojii, chọpụta ma ha dị ọkwa ma zuru oke. Emeghị ka ezughi oke dị ka mgbakwunye. A ga-ewepụsị adịghị ọcha ọ bụla dị na pavụ ahụ ozugbo iji hụ na ọ dị mma.
8. A ga-eme ka quartz ájá ma ọ bụ rọba roba dị na paving kpuchie ka ọ dị mfe iji mee ka ájá quartz ahụ ma ọ bụ roba ya dịrị. Mgbe quartz ájá ma ọ bụ ihe roba na-emeghere, ị nwekwara ike iji ahịhịa siri ike ma ọ bụ ụdị drọd dị mfe iji kpuchie azụ wee mee ka quartz ájá daa kpamkpam na ọnụ ọgụgụ.
9. Emechaa ịtọgbọ ahụ, lelee ma nabata ụzọ ọpụpụ.
2. Uru nke turf wuru na ụlọ akwụkwọ ọta akara
1. All-weather: kpamkpam emetụtaghị ihu igwe, na-eme ka arụmọrụ nke saịtị ahụ dịkwuo mma, a pụkwara iji ya mee ihe na oke ihu igwe dịka oke oyi na oke okpomọkụ.
2. Evergreen: Mgbe ahịhịa sitere na anụ ga-abanye n'oge ụra, ahịhịa wuru wuru nwere ike inye gị mmetụta nke oge opupu ihe ubi.
3. Environmental nchedo: All ihe izute gburugburu ebe obibi-echebe chọrọ, na keakamere turf elu nwere ike recycled na reused.
4. ulationme anwansị: A na-emepụta ahịhịa artificial site n'ụkpụrụ nke bionics. Ntuziaka na isi ike nke ahịhịa ahịhịa ahụ na-enye ndị ọrụ ohere ịkwaga na-enweghị ọdịiche dị ukwuu site na ahịhịa sitere n'okike, na-agbanwe nke ọma yana ụkwụ dị mma.
5. Inogide: inogide, adịghị mfe ịjụ oyi, karịsịa kwesịrị ekwesị ka nnukwu, n'etiti na elementrị na elu ugboro nke iji.
6. Economy: N'ozuzu, enwere ike ijide ndụ ọrụ nke ihe karịrị afọ ise.
7, mmezi-enweghị ego: ọ nweghị ụgwọ ọrụ ọ bụla kpatara.
8. Mwube dị mfe: Ọ nwere ike ịbụ paịlị na ndabere nke korota, ciment, aja siri ike, wdg.
Kedu otu esi eme nhicha na ndozi nke PVC egwuregwu egwuregwu?